Brightness Of Your Smile | Fomba tsara indrindra mahafotsy Teeth Guide
Posts tagged "famirapiratana ny ny tsikinao"
Mahafotsy ny nify amin'izany Easy
Raha toa ianao ka nieritreritra Whitening ny nify, nefa dia tsy matoky foana momba ny dingana, ary tsy azo antoka hoe aiza no hanombohana, mila mamaky amin'ny. Hahita soso-kevitra isan-karazany ao amin'ity lahatsoratra ity mba hanampy anao hahatakatra ny fomba Whitening nify, manampy anao hahatratra ny bast vokany azo atao.
Jereo ho an'ny sakafo staining mivantana aorian'ny Whitening fitsaboana. Ny nify dia hatao voaloto mora kokoa indray mandeha efa whitened. Rehefa avy Whitening, miezaka ny hijanona lavitra sakafo sy zava-pisotro izay maizina ny lokony. Aza kafe indrindra indrindra satria dia afaka mahazo an-tampony sosona ny nify sy hampihenana ny famirapiratry ny ny tsikinao.
SOSO-KEVITRA! Ampiasao organika voaniho menaka ho an'ny voajanahary nify Whitening. Swishing ny diloilo manodidina ny vava fa manodidina ny folo minitra isan 'andro dia afaka tsara mahafotsy ny nify.
Voasarimakirana sy ny voasary dia tena tsara ny vitamina C loharano, fa izy ireo dia afaka ihany koa ny mahafotsy ny nify. Andramo namafa ny ao anatiny ny voasarimakirana na volom-boasary Peel tokony hahosotra ny nify mba hahazoana azy ireo fotsy. Azonao atao mihitsy aza manampy kely ny sira ny peels mba hanatsarana ny vokatra hita maso fa ity no hanolotra fomba.
Mampiasa fanaova soda ny miborosy nify. Mba mahafotsy ny nify mazava ho, fanaova soda manao fahagagana. Aza adino ny miborosy moramora rehefa mampiasa mofo soda, dia mety mainka nampahaditra ny ramy ho an'ny olona sasany.
SOSO-KEVITRA! Mba hanao namboarina Whitening toothpaste fampiasana peroxyde sy fanaova soda mifangaro amin'ny faritra mitovy. Ampiasao izany zavatra mifangaroharo ny miborosy nify mandritra ny folo minitra.
Ny zavatra voalohany izay tokony hatao mba hahazoana fotsy nify dia ny manatrika tsy tapaka nify cleanings. Get ny nify nanadio isaky ny enim-bolana, ary hahatonga ny fotoana ho avy raha mbola ao ny birao noho ny amin'izao fotoana izao ny fanadiovana.
Misotro be dia be ny rano dia lehibe teknika mba hanampy foana ny nify fotsy. Misotro rano ampy hosasany ny vavanao, manakana stains avy amin'ny fananganana amin'ny nify. Izany dia fomba fanao tsara ny misotro rano, indrindra nandritra sy taorian'ny sakafo.
SOSO-KEVITRA! Te ny nify mba hijery fotsy? Mihinàna ny paoma. Paoma no tena Marokoroko ka manadio ny nify haingana tsy niteraka misy fahasimbana ny karazana verinia ny nify.
Mihinàna sakafo mahasalama; sakafo manta toy ny voankazo na legioma raha te-hahita fotsy nify. Miezaha tsy sakafo toy izany rehefa mbola azo atao mba hanampiana ny nify salama foana. Tokony ihany koa ny tsy snacking be loatra raha te-foana ny tsikinao mamirapiratra.
Ampiasao ny mololo, raha ianao misotro ranon-javatra misy maizina. A mololo whitens nify amin'ny alalan'ny mihena ny habetsaky ny fotoana izany mitaky ny zava-pisotro mba hampietreny ny nify. Amin'ny mandeha hidina mahitsy ny tendany sy ny manana kely dia kely nifandray tamin'ny karazana verinia, misy tsy staining sy discoloration.
SOSO-KEVITRA! Rehefa avy maintsy ny nify Whitening fomba fanao, dia zava-dehibe fa mazava tsara ihany no hisotro ranon-javatra, fara fahakeliny telo na efatra andro. Amin'izao andro tany am-boalohany, loko isan-karazany avy amin'ny voankazo ho maizina zava-pisotro afaka hifantoka tanteraka ao an-nify.
Raha misy satro-boninahitra eo am-bavanao, ny nify dia mety mahafotsy; na izany aza, ny satro-boninahitra dia hitoetra mitovy loko.
Raha haingana sy ny vokatra dia ny tampony nify-Whitening laharam-pahamehana, mahazo ny tenanao ny mpitsabo nify ASAP. Maro ny soa izay nify Whitening afaka manome ho anao, Na dia mety koa voka-dratsy ihany koa. Fahendrena ny hanontany ny mpitsabo nify eo anatrehanao miezaka mahafotsy ny nify, mba ho azo antoka fa salama izy ireo, ary ny stains tsy ho vokatry ny antony olana. Play izany soa aman-tsara; hanorina salama sy mahomby drafitra ho an'ny Whitening ny nify amin'ny mpitsabo nify ny fanampian'i.
SOSO-KEVITRA! Raha mifoka sigara, ny fitaovana mahery vaika indrindra ho an'ny Whitening ny nify no manome ny fahazarana. Tena ilaina ny mandany vola amin'ny nify Whitening vokatra raha toa manohy ny fifohana sigara.
Miborosy nify taorian'ny sakafo rehetra dia hanampy mba tsy stains. Izany dia tena marina raha ny amin'ny kafe.
Miborosy nify manampy ny miaro azy ireo. Haka tsara toothpaste, izay miady lavadavaka ary manampy mahafotsy nify. Misy marika isan-karazany, fikarohana azy ireo izany dia afaka manampy anao hahita izay miasa ho an'ny nify.
SOSO-KEVITRA! Raha toa ianao ka mikasa ny hahazo tariby vy fanitsiana tongotra ao amin'ny hoavy tsy ho ela, torohevitra iray dia izay mahafotsy ny nify eo anoloan'ny manomboka ny dingana. Raha maka torohevitra ity, dia hiafara amin'ny nify izay tsy straighter, fa fotsy ihany koa.
Matetika rano fisotro madio dia hanampy anao amin'ny fotsy nify. Rinsing ny nify amin'ny rano koa hosasana ho afaka poti izay mety nify discoloration. Ataovy ho fahazarana ny hisotro rano mandritra ny sakafo sy ny sakafo.
Intsony mampiasa miborosy nify. Nanapaka miborosy nify avy ao amin'ny fiainanao dia mety mamaha olana ianao foana rehefa miaraka amin'ny fotsy nify. Miborosy nify atao ny maro manimba simika. Ny sasany amin'ireo zavatra simika afaka voalotoko sy discolor ny nify.
SOSO-KEVITRA! Ny fomba iray mba hanampiana ny nify mbola fotsy dia ny tsy hisotro zava-pisotro malefaka maro. Zava-pisotro misy fandokoana izay discolors sy stains nify.
Mihinana fromazy taorian'ny sakafo dia afaka manampy ny mineraly afa-po ny nify. Hita tamin'ny fikarohana natao fa manome kalsioma ny nify karazana verinia fahafahana mba hanorina indray.
Tsara nify Whitening tendron'ny ravin dia ny mampiasa Walnut hodi-kazo. , Raha mampihatra izany karazana hodi-kazo amin'ny nify Whitening miteraka fiantraikany lehibe, Ary koa manome lalina ny fanadiovana. Tokony hosasany avy ny vavanao sy miborosy nify tsara rehefa mampiasa ny hodi-kazo.
SOSO-KEVITRA! Baking soda dia azo ampiasaina ho toy ny moramora izay ihany koa Marokoroko sy toothpaste whitens ny nify rehefa nasiana peroxyde. Miborosy nify mampiasa izany fifangaroana ho an'ny mamirapiratra nify tsy ny mampidi-doza simika.
Mihinana sakafo amin'ny crunch mety ho tena mandaitra. Foods, toy ny karaoty tapa-kazo sy ny paoma, hanampy hitandrina ny nify fotsy. Sakafo izay manopy afaka manadio ny nify raha ve ny Mitsako. Tandremo mba handringanako azy amin'ny toe-javatra ny rehetra, fa tsy slicing na dicing azy ireo.
SOSO-KEVITRA! Mihinàna sakafo dairy bebe kokoa. Zavatra toy ny ronono, dronono sy yogurt manana zavatra mahavelona ao ireo izay mandray anjara amin'ny matanjaka, salama tsara tarehy nify.
Tokony ho fantatrao fa misy Whitening rafitra voajanahary ihany no miasa amin'ny nify. Raha manana nify toy ny veneers asa, veneers, satroboninahitra na dia nahafeno eo amin'ny anoloan'ny vavanao, dia tsy miova ny lokony. Whitening ny nify voajanahary mety asa nify hifikitra mafy toy ny ankihibe.
Andramo ny dranomasina mifangaro ny mahafotsy ny nify. Afangaroy antsasaky ny sotrokely vatolampy sira miaraka amin'ny rano iray kaopy ary izany mipetraka any nandritra ny dimy minitra. Gargle amin'ny sira rano, fa tsy ny miborosy nify. Ity teknika dia afaka manampy mampihena ny bakteria mba mametra ny habetsaky ny lavadavaka eo am-bavanao.
SOSO-KEVITRA! Voankazo isan-karazany manome anao ny fomba azo antoka sy mandaitra mba ho azy hahatonga ny nify fotsy. Ohatra, frezy mety ho tena mandaitra.
Rehefa trays Tsy mety araka ny tokony ho, mora foana ny zavatra simika mety hisy fiantraikany ny hihy faritra ka hahatonga fahasosorana na mamaivay.
Maro ny fomba azo antoka sy mora mba mahafotsy sy miramirana ny nify izay tsy lafo harena. Ny fomba lehibe dia ny fampiharana ny fampiasana ny fanaova soda. Misy toothpastes izay ahitana fanaova soda izay afaka mividy, na fotsiny mampiasa ny zavatra ao an-cupboard ao an-trano.
SOSO-KEVITRA! Aza handray anjara amin'ny fifohana sigara sigara na sigara. Izany no mahatonga ny nify discoloration.
Raha Whitening toothpastes tsy ny herin 'ny fomba Whitening hafa, afaka misakana na manala ny vaovao stains. Ireo toothpastes mampiasa silica Marokoroko sy izay tsy hanimba ny karazana verinia.
Andramo ny sasany mampiasa sira rehefa miborosy nify. A tsotra, nefa mahomby fitaka ny Whitening ny nify dia fanilihana sira. Tsy maintsy hosasany ny vavanao tsara isaky ny miborosy. Satria Marokoroko, tsy hatao nentina ho babo amin'ny fanilihana sira.
SOSO-KEVITRA! taorian'ny sakafo, mitsako Whitening hihy toy ny mihodina mba hiarovana ny tsikinao. Misy karazana hihy dia namoaka ny mahafotsy ny nify.
Tokony miborosy, ary koa ny hampihatra ny hihy fanorana. Ny fomba tsara indrindra mba hahazoana antoka ny tsikinao mijanona fotsiny fotsy dia ny miborosy sy floss rehefa avy misakafo. Izany dia mamela anao manala ny sakafo sisa sy ny takela-pahatsiarovana alohan'ny hanangana ka hahatonga misy fahasimbana.
Ny akondro Peel azo ampiasaina rehefa miborosy nify. Izany no fomba tsotra fa ny ankamaroan'ny olona mianiana asa. Hamafàny noho ny nify amin'ny akondro Peel alohan'ny fanilihana azy ireo. Miborosy nify Avy eo ianareo, toy ny anao foana no. Ho hitanao avy hatrany vokatra ao amin'ny nify.
Mavo nify dia mora foana ny olona iray fitarainana famantarana fa olona iray smokes. Mety ho sarotra ny mitandrina ny mifaritra fotsy rehefa mifoka. Raha tsy maintsy mifoka, Miezaka mifoka kely mba hahafahanao ho salama kokoa ary tsara kokoa ny mitady nify.
Whitening ny nify no lehibe ara-bakiteny fomba tsara kokoa ny kalitaon'ny ny fiainanao. Fotsy nify tsy vitan'ny hoe mahatonga anao manintona kokoa; izany dia manampy anao mba ho matoky kokoa amin'ny fiaraha-monina. Ho hitanao fa vonona kokoa ianareo mba hivoaka ary manao zavatra amin'ny hafa. Ampiharo ireo toro-hevitra mba hahabetsaka ny vokatra, ka hahatratra azy haingana sy afforadably.
Posted by mahafotsy Teeth Guide - Jona 5, 2016 amin'ny 12:32 AM
Sokajy: Home Miorina amin'ny mahafotsy Nify Tags: beauty tsiky, famirapiratana ny ny tsikinao, mahafotsy ny nify, Mahafotsy ny nify Easy, Whitening ny nify